Ingobo yomlando yeBuschbrand - Amalungelo Abantu Nobuciko Bokukhanya ngu-∴ PixelHELPER Foundation
Amahlathi esikhundleni samabhomu agqitshwayo. Iphephandaba elikhulu kunawo wonke eMorocco libike namuhla ngesiphakamiso sethu ePhalamende lase-Australia lokuthi sicele iNkosi yaseMorocco ukuthi isinike indiza yezimayini iHercules-C130 ukuze sikwazi ukuyiguqulela ekutshaleni kabusha amahlathi eMorocco nase-Australia. Ifektri encane lapha endaweni yethu yaseMorocco kufanele ikhiqize imicibisholo yezihlahla eyehliswe. Kepha akukho esingakwenza ngaphandle kosizo lwenkosi yaseMorocco. Njengoba engaphendulanga ezincwadini zethu zokugcina, asiwaboni amathuba, kepha sibheke phambili ezimangalisweni ezinhle.